Taageerayaasha kooxda Man United oo soo gaaray war naxdin leh kahor kulanka adag ee Liverpool – Gool FM
(Manchester) 16 Okt 2019. Manchester United ayaa weyn doonta adeegyada laba ka mid ah xiddigaheeda kuwaasoo muhiim u ah qorshaha tababare Ole Gunnar Solskjær, kahor kulanka soo aadan ay ciyaari doonto.
United-ka ayaa weyn doonta adeegyada xiddigaha Paul Pogba iyo David de Gea kulanka adag ay kula ciyaari doonaan naadiga Liverpool horyaalka Premier League.
Red Devils ayaa ku soo dhaweyn doonto garoonka Old Trafford kooxda hogaamineysa horyaalka Premier League ee Liverpool maalinta Axada ee soo aadan.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa xaqiijisay daqiiqado ka hor in labada ciyaaryahan ee Pogba iyo De Gea aysan ku jiri doonin liiska kooxda Manchester United kulanka ay Axada la ciyaari doonaan Reds.
Maqnaanshiyaha labada xiddig ayeey dharbaaxi xoogan ku noqon doontoo qorshaha tababare reer Norwegian ee Ole Gunnar Solskjær, kahor kulanka muhiimmka ah ee u muuqda inuu ku xirnaan doono mustaqbalkiisa tababarnimo ee garoonka Old Trafford.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ku gudi jira xilli niyadjab ah sababa la xiriira natiijooyinka xun ay kooxda la kulantay dhawaantan, taasoo ka dhigeysa in mustaqbalka macalinka reer Norwegian ee garoonka Old Trafford mid aan lagu kalsoonaan doonin xilliyada soo socda.